Funda indlela yokuHamba kwi-Forex | Urhwebo njengePRO! - Funda nge-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
UngayiHedge njani kwi-Forex-Urhwebo njengePRO! 2021
Ukuhlaziywa: 1 Disemba 2021
Kungenzeka ukuba uvile nge-Forex. Emva kwayo yonke loo nto, yeyona ndawo yentengiso yolwelo emhlabeni. Ngale nto ithethwayo, uthango kwi-forex yeyona ndlela isebenzayo yokulwa umngcipheko wokutshintsha kwamaxabiso kule ndawo yokurhweba ingazinzanga.
Kananjalo, ukuba ujonga isicwangciso esitsha se-forex, ke ukubiyela iimali kunokuba njalo. Ukukunika ulwazi oluthe kratya malunga nesihloko, siza kuhamba ngayo yonke into ukusuka kwindlela yokubiyela kwi-forex ukuya kwizicwangciso eziphambili kunye nezixhobo onokuzisebenzisa.
Siza kuphinda sikhanyise ngendlela onokuthi ukhethe ngayo umrhwebi olungileyo okuvumela ukuba uthabathe iimali kwindawo enendleko kwaye ikhuselekile.
Ngamafutshane, 'ukubiyela' yinto eyenziwa ngabarhwebi ukuze balungelelanise isoyikiso sokunyuka kwamaxabiso ukuya ezantsi emgceni. Ngokwenza oku, ukhusela isikhundla sakho. Ukhuseleko olukhankanyiweyo luthathwa njengesisombululo sethutyana.
Ihlala iphunyezwa ngumrhwebi njengesiphumo sokungazinzi kwimarike ye-forex okanye ibali elikhulu leendaba elinokuthi lichaphazele imarike yemali xa iyonke.
Ukuhlulwa kuza ngabarhwebi abazama ukuphelisa okanye ubuncinci ukunciphisa ukubonakaliswa kwemali yelinye ilizwe ehamba norhwebo lwezezimali. Amashishini amaninzi akhetha ukuzimela kwiintengiso ezahlukeneyo ngeenjongo zokulinganisa ubungozi obunokubakho
Ukufihla izinto zisetyenziswa ngamashishini amakhulu kwaye Abathengisi bemihla ngemihla. Kukho iindlela ezimbalwa ezahlukeneyo kunye nezixhobo onokuzisebenzisa ukuqala ukubiyela kwaye siza kuchaza kancinci kancinci kungekudala.
Kutheni le nto abaThengisi beHedge ye-Forex?
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni abathengisi bebiyela i-forex. Ihlala iyindlela yokwenza umnatha wokhuseleko xa kuthelekiswa nokuhla kwamazinga emali. Ngokufana nayo nayiphi na indawo yokurhweba, akukho ndlela yokwenyani yokudala imeko ye-forex engenabungozi. Ngale nto ithethwayo, akukho nto inokuphika ukuba isicwangciso sokubamba sinokunceda ukunciphisa okanye ubuncinci ukulawula ilahleko zakho.
Ngenxa yenyani kwimarike Forex Imvelo ayitshintshi, ukuzikhusela ngee currencies kwahlukile kuhlobo lokuzibiyela kwiimarike ezizezinye. Kuyavunywa, abanye abathengisi baziva ngathi akukho sizathu sokuvingca kwaye kunokuba bamkele nje uhlobo lwentengiso ye-forex. Kukho ke abanye abanokukhetha ukunciphisa umngcipheko wabo kwintengiso engazinzanga.
Inyani yile-ngaphandle kokuba uyonwabile ukwamkela nje ukuba urhwebo lwe-forex lunokuba yingozi, emva koko unokufuna ukusebenzisa i-hedging njengendlela yokuphelisa ilahleko yexesha elifutshane. Ukuba unoluvo lokuba ixabiso lesibini semali liya kuhla, ngaphambi kokuba ubuye umva, ungafaka uthango kwisicwangciso sakho.
Okulandelayo, siza kukuqhubela kwezinye zezona zicwangciso zidumileyo kunye nezixhobo ezisetyenziswa ngabarhwebi ababiyela i-forex- ke uya kube urhweba njenge pro ngexesha nje!
Ngoku uyazi ukuba kuthetha ukuthini uthango kwimeko yokurhweba kwangaphambili, singene kwiinkcukacha ezithe kratya malunga neendlela ezahlukeneyo onokuzibiyela kwimarike yemali.
Nazi ezinye zeendlela ezithandwayo zokuloba i-forex ezisetyenzisiweyo namhlanje.
Ngamanye amaxesha kuthiwa 'kukurhawulwa okulula', oku kuhlala kuxa umrhwebi evula izikhundla ezibini ezahlukeneyo kwindawo eqhubekayo. Oku kuya kuba nye ixesha elide (thenga iodolo) enye mfutshane (thengisa iodolo) -Ngoko ke behamba ngendlela ephikisanayo.
Nanku umzekelo wento ebonakala ngathi:
Masithi sele ubenesikhundla esifutshane kwisibini se-forex njenge-AUD / USD
Ke iindaba zokuphuma komsitho ocinga ukuba uya kuchaphazela i-USD
Ugqiba kwelokuba uvule indawo ende kwisibini esifanayo
Ukhusele urhwebo lwakho lwe-forex
Inzuzo yakho yomnatha kwihedge ethe ngqo iya kuba zero, ke ugcina indawo yakho yokuqala kwimarike ye-forex. Oku kwenzelwe ukuba ulungele xa imeko isiya umva.
Ukuba ubiyela - unokwenza inzuzo ngorhwebo lwesibini xa imarike ichasene norhwebo lwakho lokuqala. Ukuba uthathe isigqibo sokungasibiyeli eso sikhundla- usenokuba uluvalile urhwebo lwakho kwaye uthathe ilahleko esilevini.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ayizizo zonke i-forex broker eziya kuvumela ngqo iithango, ngenxa yoko kunokuba ukhethe ukukhetha ukubamba izikhundla.
Ukufihlwa kweMali emininzi
Esinye isicwangciso sokukhusela i-forex kukukhetha ezimbini ezimbini ezahlukeneyo zemali ezibhekwa 'njengezilungelelaniswe kakuhle' kwaye zithatha izikhundla ezichaseneyo kwiqela ngalinye.
'Unxibelelwano' lwezibini lubonisa ngokwamanani indlela eziye zaziphatha ngayo iimali ngexesha elithile. Ngokuyintloko, nokuba sele behambile ngendlela eyahlukileyo, kwicala elinye okanye ngokungacwangciswanga.
Ukulungelelaniswa kwee-coefficients kusetyenziswa njengeendlela zokulinganisa kule meko, ukumisela ukomelela kobudlelwane phakathi kweemali ezimbini eziguqukayo. Oku kubonisiwe ngohlobo lokugqibela ukusuka -1 kude kube +1.
Nanku umzekelo wento yolungelelwaniso kwindawo yokubiyela ye-forex enokubonakala ngathi:
Ukulungelelaniswa okuhle: Masithi unxibelelwano ngu +1. Oku kubonisa ukuba zombini izibini zemali ziya kuhamba kwicala elinye ixesha elininzi. Olunye udidi oluhambelana nolungelelwaniso lubandakanya i-AUD / USD, i-EUR / USD, i-GBP / i-USD, kunye ne-NZD / i-USD. Umzekelo wethu, siya kusebenzisa i-AUD / USD kunye ne-EUR / USD. Beka ngokulula- ukuba i-AUD / USD ithengisa ngaphezulu, i-EUR / USD iya kuhamba ngendlela efanayo.
Ukulungelelaniswa okungalunganga: Kwelinye icala, masisebenzise i-USD / CHF kunye ne-USD / CAD. Kulo mzekelo, unxibelelwano lwe -1 luya kubonisa ukuba i-USD / CHF kunye ne-USD / CAD ziya kuhamba ngeendlela ezichasayo ixesha elininzi. Imizekelo embalwa yeerandi zonxibelelwano ezingalunganga zii-USD / JPY, i-USD / i-CAD, kunye ne-USD / CHF. Njengoko ubona, i-USD yimali esisiseko.
Masicinge ukuba uhambe mfutshane kwi-GBP / USD, emva koko uthatha isigqibo sokuvula indawo ende kwi-EUR / USD ukukhusela umngcipheko we-USD yakho.
Ukuba iponti wenza yehla ngokuchasene nedola yaseMelika, emva koko eso sikhundla side kwi-EUR / USD sinokulahleka. Nangona kunjalo, iya kuncitshiswa zizuzo kwindawo yakho ye-GBP / USD. Ngokufanelekileyo, ukuba i-USD iye yawela kweli nqanaba, nayiphi na ilahleko kweso sikhundla sifutshane iya kulungelelaniswa nothango lwakho.
Ukufihla iiperi zemali ezininzi akufuneki kuthathwe kancinci, kuba kukho umngcipheko obandakanyekayo. Kumzekelo wethu, siwubiyile umngcipheko kwi-USD, kodwa nathi, sikwaveza umngcipheko omfutshane kwi-EUR, kunye nomngcipheko omde kwi-GBP. Into kukuba, akukho ziqinisekiso nasiphi na isicwangciso sokurhweba. Ngale nto ithethwayo, ukuba uwunciphisa ngempumelelo umngcipheko ngale ndlela unokubona ukuzuza.
Umahluko ophambili phakathi kokuchongwa 'kokuchongwa ngokuthe ngqo' kunye 'nothotho lwemali oluninzi' kukuba xa uthango ngeemali ezininzi- indawo enye inokuthi ivelise inzuzo engaphezulu kunenye ilahleko. Ngothango olungqalileyo, isiphumo somnatha sinqabile ukudlula zero.
Inketho ye-forex ikwenza ukuba urhwebe ngezibini zeFX ngexabiso elimiselweyo ngaphambi kwexesha elimiselweyo. Xa kuziwa kwizixhobo zokubiyela, ukhetho ziluncedo ngokwenene. Isizathu kukuba bakunika ithuba lokunciphisa umngcipheko kwaye kufuneka ubhatale kuphela i-premium.
Nanku umzekelo weqhinga lokukhetha i-forex:
Unayo i-oda yokuthenga kwi-GBP / USD ngexabiso le-1.32
Nangona kunjalo, ubeka phambili ukuba kuya kubakho ukwehla ngequbuliso
Ngesi sizathu, uthatha isigqibo sokuwubiyela umngcipheko ngokusebenzisa ukhetho kwi-1.32, ephela emva kwenyanga enye.
Kumzekelo wethu ongentla, ukuba ngexesha lokuphelelwa lixesha lifikile ixabiso sele liphantsi kuno-1.32 - isikhundla sakho eside siza kubona ilahleko, kodwa ukhetho lwakho luya kwenza uzuzo kunye nokulinganisa loo mngcipheko.
Ukuba ixabiso le-GBP / i-USD liphezulu kune-1.32, kuya kufuneka uhlawule kuphela ixabiso lokhetho olubekiweyo (ipremiyamu).
Kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuba ayizizo zonke iindawo zokurhweba ezinikezela kubarhwebi, ke ukuba le yinto onomdla kuyo kuya kufuneka uqiniseke ukuba iqonga likuvumela ukuba uthengise ngaloo ndlela.
Xa kuziwa kwimisebenzi, kukho imigaqo embalwa oza kuyibona rhoqo xa ujikeleza kwi-forex. Kananjalo, sidibanise inkcazo yezixhobo ezisetyenziswa rhoqo zokubiyela.
I-Robot yokuHlala ngokuZenzekelayo
Sebenzisa inkqubo yorhwebo oluzenzekelayo xa urhwebo lwe-forex lunokuba luncedo kakhulu. Oku kunjalo ngakumbi ukuba ungumrhwebi omtsha okanye ufuna ukubuyela umva. Amathuba okuba uvile ngeerobhothi zokurhweba kwangaphambili, ekwabizwa ngokuba Ii-EAs zangaphambili (Abacebisi beengcali). Banobuninzi beendaba zosasazo lwasekhaya emva kwexesha- oko kukuthi, ngenxa yesibhengezo sosaziwayo esidumileyo.
Kwimeko apho ungayiqapheli le meko-irobhothi ezenzekelayo yokuthenga iyathengisa kwaye ithengise egameni lakho isebenzisa ubuchule obuphezulu. Oko kuthetha ukuba akusekho sidingo sokuchitha iinyanga zokufunda ukufunda iitshathi kunye nokwenza uhlalutyo lobuchwephesha. Endaweni yokuba i-bot iyenza yonke into kwaye ikuvumela ukuba urhwebe ngokungakhathali iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Kwimeko yeerobhothi zokurhangqa i-forex, iya kuyilwa ngohlobo olwenza ukuba ilungele ulawulo lomngcipheko.
Ngamanye amagama, iya kudibanisa uphando lwendlela, ukuthenga, ukuthengisa, kunye nokuvula izikhundla ezininzi ngaxeshanye. Ngokufana nokuzikhusela, i Forex robot ujonge ukugcina ukuhamba kwemali yakho kunye nokubonelela ngomnatha wokhuseleko xa, okanye ukuba, kwenzeka into engalindelekanga kwimarike ye-forex.
Kule hlobo lwezorhwebo, ngaphandle kokuba ubeke umda okanye umise i-odolo, umthengisi wakho uya kuvala ngokuzenzekelayo indawo yokuqala. Ngokusisiseko, urhwebo olutsha luzakucima - nto leyo eyaziwa ngokuba yi'netting off '.
Nanku umzekelo we 'net off':
Masithi une-oda yokuthenga kwi-EUR / USD nge- € 200
Emva koko wenza i-200 yee-oda zokuthengisa kwi-EUR / USD (ukuyirhawula)
Indawo yoqobo iya kuvalwa ngenxa yokubeka i-odolo echaseneyo
I-oda yakho 'icinyiwe'
Ngamanye amagama, nokuba uyarhweba nge-forex, isitokhwe, isinyithi esomeleleyo, iibhondi, okanye naluphi na udidi lweeasethi zalo nto-uya kuhlala uvale indawo evulekileyo ngokubeka i-odolo echaseneyo nale ibalaseleyo. Kananjalo, kuyakufuneka ufumane umthengisi we-forex ekuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise indawo evulekileyo ngaxeshanye, kwisibini esinye semali.
Umkhosi ovulekileyo ngumsebenzi osetyenziswayo wokurhweba uthango othintela abarhwebi ekubeni basuse izikhundla zakho. Ukubeka ngokulula, lo msebenzi uthetha ukuba ungavula indawo entsha- kwicala eliphikisayo kulawo orhwebo lokuqala.
Ngenxa yoko, uyakwazi ukugcina zombini izikhundla zivulekile kwindawo enye yentengiso- nakwi-asethi efanayo (ende kwaye mfutshane).
Apha ngezantsi kukho umzekelo 'wokuvula ngamandla'
Kule meko, masicinge ukuba uvula indawo emfutshane eyi- $ 500 kwi-AUD / NZD
Uqikelela ukuba i-AUD / NZD iya kubona ukunyuka kwamaxabiso ngokufutshane
Masithi ngoku uvula indawo yokuthenga eyi- $ 500 kwi-AUD / NZD (ukwenzela ukunciphisa iilahleko ezinokubakho)
Kule meko, abathengisi baya kuthi bazilahle zombini izikhundla zakho. Ke njengoko sichazile ngasentla, oku kuthetha ukuba indawo yakho yokuqala iya kuvalwa. Nangona kunjalo, ngokukhetha 'ukunyanzela ukuvula', zombini ii-odolo zakho ziya kwenziwa. Kananjalo, oku kukuvumela ukuba ubiyele isibini semali enye.
Ungayifumana njani i-Broker Offering Hedging
Abanye abarhwebi abayivumeli i-hedging, ke ukuyifumana eyenzayo kunokuba ngumceli mngeni. Senze uluhlu lweemetrikhi eziphambili ekufuneka ujonge kuzo xa ujonge umrhwebi oza kukuvumela uthango.
Qaphela, ukuba awunalo ixesha lokuphanda nge-Forex hedging broker ngokwakho, uya kufumanisa ukukhetha okuphezulu ezintlanu ukuya esiphelweni seli phepha. Umrhwebi ngamnye uye waxilongwa buqu liqela lethu labarhwebi abangaphakathi ezindlwini ukuqinisekisa ukuba ikuvumela ukuba uthabathe iimali ngendlela ekhuselekileyo ebiza imali.
Ilayisenisi kunye noMmiselo
Kubalulekile ukuba uyenze kuqala into yokufumana umrhwebi olawulwa ngokupheleleyo ligunya elifanelekileyo. Umzekelo, iGunya lokuZiphatha kwezeMali (i-FCA).
FCA ulawula kwaye ulawula ngaphezulu kwamaqonga ama-60,000 e-UK. Ukuqinisekisa ukuba umrhwebi unelayisensi kubalulekile xa kufikwa ekukhuseleni abarhwebi kulwaphulo-mthetho lwezezimali okanye kwi-broker bankruptcy. Ungayichazanga eyokukhusela ukungafihli kwabathengi kunye nokwenza indawo efanelekileyo yezemali kuye wonke umntu.
Wonke umrhwebi ohlangana naye uya kwahluka kancinci xa kuziwa kwimirhumo. Ngelixa umrhwebi omnye enokubiza ikhomishini kurhwebo ngalunye, elinye iqonga alizukuhlawulwa-kodwa libize imali eninzi ngobusuku kunye nokungahlawuli.
Ukuba umrhwebi ojonge kuye uneefizi eziphezulu zekhomishini eziqhotyoshelwe kurhwebo ngalunye lwe-forex, emva koko unokufuna ukuzijonga kwakhona kwimizamo yakho yokubiyela.
Masithi uthengisa i-AUD / USD
Umthengisi wakho ufuna i-0.8% yekhomishini ngorhwebo ngalunye.
Ngoku yithi ubambe i- £ 1,500
Umrhwebi wakho uza kuthatha i- $ 12 xa isikhundla sivuliwe
Ukucinga ukuba indawo yakho yokubiyela ivaliwe kwindawo yokuqhekeza- kuya kufuneka uphinde uhlawule ikhomishini ye- $ 12.
Kumzekelo wethu, ikhomishini etya kakhulu kulo lonke urhwebo inokwenza nje ukuba ungazibambezeli. Ewe kunjalo, umbono wokubiyela ayenzi nzuzo enkulu, kukunciphisa umngcipheko welahleko enkulu, ngokulinganisa ngaphandle.
Ngombulelo kukho igcuntswana labarhwebi abaqeqeshiweyo nabalawulwayo kwisithuba esiya kukuvumela ukuba urhwebe ngokukhululekileyo!
The sasaza Nguwo nje kuphela umahluko phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nexabiso lokuthengisa leqela le-FX-elichazwe kwi iipipi. Ezantsi inani leepip zibangcono. Ukusasazeka ngokukhawuleza kuhlala kulungile kubarhwebi, kodwa ngakumbi imeko xa isiza kwi-forex yokutshixa.
Ukukunika umzekelo wento enokusasazeka ngayo inokusasazeka kwemibhobho emi-4:
Masicinge ukuba uthengisa nge-GBP / USD
Ixabiso 'lokuthenga' ngu-1.1443
Ixabiso 'lokuthengisa' li-1.1447
Iipipsi ze-4 zisenokungavakali ngathi zininzi, kodwa kwisithuba somthengisi we-forex, ithathwa njengeduru. Kananjalo, iya kwenza ukuba i-forex ye-forex ingasebenzi.
Kungenxa yeso sizathu sokuba uninzi lwabarhwebi abadweliswe kweli phepha linikezela ukusasazeka okungaphantsi kwe-1 imibhobho kwiibhanki ezinkulu zemali-ezinokhuphiswano lokwenene. Amaqonga afana ne-eToro nawo ayabonelela variable isasazeka. Ukubeka ngokulula, oku kuthetha ukuba ukusasazeka kutshintsho ngokweemeko zentengiso.
Ukwahlukahlukana kwemali ebini
Xa kuziwa kwi-forex, kukho iitoni zezibini onokukhetha kuzo. Ngokufanelekileyo, umrhwebi wakho we-forex uya kuba nokukhetha okuhle ekunikezeleni-ukusuka kubantwana nakubabini abakhulu ukuya kwi-exotics nakwiimali ezikhulayo.
Into enomdla kukuba, ngenxa yokuba umrhwebi evumela uthango, oko akuthethi ukuba baya kukuvumela usebenzise nayiphi na indlela. Ke, ukuba emva kokufunda eli phepha kukho iqhinga elithile (njenge scalping) ufuna ukuzama, emva koko uqiniseke ukuba umrhwebi wakho uyayivumela.
Idiphozithi kunye nokurhoxa
Kwakhona, iqonga ngalinye liya kwahluka. Uninzi lweendawo zabarhwebi zivumela abathengi ukuba bafake imali besebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuhlawula ezinje ngecredit / debit card, ukudluliselwa kwebhanki, kunye ne-e-wallets njengePayPal. Ezinye iinkampani zide zivumele abathengisi ukuba bahlawule ngeendlela ezithile zokufaka imali ezinje ngeBitcoin, nangona inikiwe, ayibonwa njengeVisa.
Kwisihloko sokulungiswa kwamaxesha, uninzi lwabarhwebi luya kuyicwangcisa idiphozithi yakho kwangoko. Nangona kunjalo, xa kuziwa kwiindlela zokuhlawula, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuba ufaka imali ngokudluliswa kwebhanki kungathatha iintsuku ukuya kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Ukurhoxiswa kwemali kulula kumaqonga wabarhwebi, nangona kunjalo, uhlala ujonga itafile yemirhumo ukuze uqiniseke ukuba awuzukuhlawuliswa amaxabiso aphezulu.
Izixhobo zobuChwephesha bobuchwephesha kunye nezixhobo zemfundo
Abarhwebi kwihlabathi liphela bafunga izalathi zobugcisa kunye nezixhobo zokubanceda ekwenzeni izigqibo zorhwebo.
Sidwelise ezinye zezona zikhombisi zixhaphakileyo zobugcisa kwisithuba:
Ukuhambisa umahluko wokudibana phakathi (MACD)
Umndilili wokuhamba (MA)
Inkcazo yamandla enxulumene (RSI)
Ukuma kunye nokubuyela umva (SAR)
Isalathiso sesikhokelo somndilili (ADX)
I-avareji yokuhamba ebonakalayo (EMA)
Hlanganisa ezinye zezalathi zobuchwephesha ngezixhobo zolawulo lwemali kwaye unokuba kwimeko engcono kakhulu ukuqala. Enye indlela yokuziqhelanisa nezi zixhobo kukuziqhelanisa neakhawunti yedemo.
Kwintengiso ye-forex, ukufunda uhlalutyo lwembali kunye neetshathi zamaxabiso kunokukunceda uqikelele iimeko ezizayo kunye nemo yentengiso yezemali. Ukuba kunokwenzeka ungabi namava kwiimarike emva koko amanye amaqonga wabarhwebi anika abathengi ukhetho olukhulu lomxholo wemfundo kunye needemo.
Ngale ndlela unako ukurhweba ngemali yedemo kwindawo yentengiso ephilayo kwaye ngenxa yoko-ungene kumngxunya we-forex ngaphandle kokubeka eyakho imali eyingozi.
Inkonzo yabaThengi yinxalenye ebalulekileyo yokuba nobudlelwane obuhle nomrhwebi. Into yokugqibela oyifunayo ngumrhwebi onenkonzo engeyiyo okanye iqela elingahlali likho. I-Forex yimarike ye-24/7 ngokufanelekileyo, ufuna iqela lenkonzo yabathengi lifumaneke nge-24/7 nayo.
Iinkonzo eziqhelekileyo zabathengi ziingxoxo eziphilayo, i-imeyile, ifom yoqhagamshelwano kunye nomnxeba. Ukuba necandelo elibanzi le-FAQ kunokukunceda ukuba uku-jam yokurhweba.
Ungasayina njani kwi-Forex Broker
Ngoku uyazi ukuba yeyiphi i-forex yokubiyela malunga nayo, kunye neemetrikhi eziphambili ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha umrhwebi, unomdla wokuqalisa. Ukuba kunjalo, landela izikhokelo zenyathelo ngenyathelo ezichazwe ngezantsi ukuze ufumane ikhondo lakho lokuloba le-forex eliqale ngoku!
Inyathelo 1: Bhalisela uMrhwebi
Yiya kwiwebhusayithi yomrhwebi oyikhethileyo, kwaye ucofe iqhosha elithi 'sayina'.
Uya kucelwa ukuba ufake uluhlu lweenkcukacha zakho-njengegama lakho elipheleleyo, idilesi yasekhaya, umhla wokuzalwa, idilesi ye-imeyile kunye nenombolo yefowuni. Kuya kufuneka ukhethe igama lomsebenzisi kunye negama eligqithisiweyo.
Inyathelo 2: Ngenisa i-ID yakho
Ngokomthetho olawula umzimba (KYC), nawuphi na umthengisi we-forex oxabisa ityuwa yakhe uya kufuna ikopi yencwadana yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba-ukuqinisekisa ubungqina bakho.
Ukongeza koku, inkampani iya kuyidinga inombolo yakho yerhafu yelizwe kunye ne-bili yokunceda ekhutshwe kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo. Ngapha koko, kuya kufuneka unikezele ngembali emfutshane yokurhweba kunye neenkcukacha malunga nemeko yakho yezemali.
Inyathelo 3: Yenza idiphozithi
Okulandelayo, kuyakufuneka ubeke imali, kwaye kufuneka ibe sisixa esincinci esifunekayo eqongeni. Kukho iindlela ezininzi zokuhlawula ezikhoyo, kwaye njengoko besitshilo, uninzi lukhona kwangoko, ngaphandle kokudluliselwa kwebhanki okunokuthatha iintsuku ezininzi.
Inyathelo 4: Qala kwiHedge Forex / Zama iAkhawunti yeDemo
Yiloo nto, ngoku ubhalisile kunye neakhawunti yakho ye broker ye forex kwaye ungaqala ukurhweba. Nokuba sele unamava amaninzi okurhweba, ayisiyombono imbi ukuqala ngeakhawunti yeedemo. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba umtsha kwi-forex hedging.
Abarhwebi be-Forex abagqwesileyo ababonelela ngeHedging kwi-2021
Ngoku uxhobile emazinyweni ngayo yonke into enokuyenza nge-forex yokubiyela, kufuneka ufumane umthengisi owamkela iindlela zokurhola kwaye unokufumana urhwebo.
Sidwelise abathengisi abahlanu abalungileyo abalawulwayo kwaye bayifanele le nkcazo, zonke ezi kufanelekile ukuba uziqwalasele.
1.I-AvaTrade -IQonga lokuRhweba ngeNtlalo eliHleliweyo
Eyasungulwa ngo-2006, i-AvaTrade ngumthengisi we-forex ozinzile kunye nabathengi abangaphezu kwama-200,000 kwiqonga layo. Umrhwebi unikezela abathengi abatsha abafake i- $ 100 okanye nangaphezulu nge-20% yebhonasi eyamkelekileyo kwi-forex. oku kuhlawulwa ukuya kuthi ga kwi-10,000 leedola kwaye ufanelekele elona xabiso liphezulu, kuya kufuneka ubeke i $ 50,000 kwiakhawunti yakho.
Eli qonga lineentlobo ngeentlobo zezixhobo ekunikezelweni ngabarhwebi, kwiimarike ezahlukeneyo. Ngapha koko, lo mrhwebi uhambelana ngokwenene. Ungafikelela kwi-AvaTrade nge-DupliTrade (iqonga lokurhweba eluntwini), MT4 / 5 okanye i-AvaOptions.
Eli qonga labarhwebi lixhasa iimfumba zezixhobo, ezinje ngee-cryptocurrency kunye nee-stock ze-CFD, kwaye kukho ngaphezulu kwama-50 ezigidi zemali ezikhoyo. Yonke into oyifunayo kufuneka ubhalise kwaye uqale uthango lwe-forex yi- $ 100 kwidiphozithi yakho yokuqala. I-AvaTrade ibiza iifizi zekhomishini kwaye inikezela abathengi ukusasazeka okuqinileyo.
Ngokungafaniyo namaqonga orhwebo, le ndawo inempawu zolawulo lomngcipheko kunye nezixhobo zohlalutyo lobuchwephesha. Ubungakanani be-forex bufakwe kwi-1: 30 kwaye kukho ukusikelwa umda kwi-hedging okanye kwiirobhothi ezizenzekelayo. Njengabo bonke abanye abarhwebi kuluhlu lwethu, i-AvaTrade ilawulwa ngokupheleleyo. Ngapha koko, inkampani inamaphepha-mvume asuka kumagunya aliqela.
Zero ikhomishini yorhwebo
Ukuqina kusasazeka kwii-0.70 iipipi
Uhlalutyo lobuchwephesha kunye nezixhobo zolawulo lomngcipheko
Intlawulo yokungasebenzi yi- $ 50 ngekota
Akukho nkxaso yefoni
Ndwendwela i-AvaTrade ngoku
2. I-Capital.com- Inkulu kubaQala
I-Capital.com ibalasele kubarhwebi bawo onke amanqanaba amava kuba iqonga kulula ukulihamba. Okokuqala, unendawo efanelekileyo yokudibanisa iwebhusayithi, kwaye emva koko kukho ukhetho lokukhuphela usetyenziso lweCapital.com- ezo zombini zicocekile kwaye zisebenziseka lula.
Ngaphaya koko, zininzi izixhobo ezikhoyo zokurhweba ngale broker, kwaye ifemi ikwenza ukuba ubiyele i-forex. Eyona nto intle- le brokerage ibiza zero ikhomishini kwaye inikezela ngokusasazeka okukhuphisanayo. Ayisiyiyo le kuphela, kodwa akukho ntlawulo yokungasebenzi ukuze uzikhathaze ngayo uthathe isigqibo sokuba uthathe ikhefu kwezorhwebo. Ewe, iindleko ezimbalwa zokukhathazeka malunga nazo, zingcono.
Ngokwamacala amabini e-forex, kukho iimfumba onokukhetha kuzo apha, kwaye ungaqala nge- $ 20 encinci ukuba uhlawula nge-e-wallet okanye nge-debit / ngecredit card. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuba uthatha isigqibo sokudlulisa ngokudluliselwa kwebhanki kuyakufuneka ubeke i-250 yeedola ubuncinci. Ukuba ufuna ukurhweba kunye nomgangatho apha unako kodwa, ngokwee-ESMA caps, umda unikezelwa ngaphandle kwe-1: 30 (e-UK naseYurophu).
£ 20 idipozithi encinci
Ukuthengisa simahla kwiCommisson kunye nokusasazeka okuqinileyo
Iqonga elihle elinomsebenzisi
Ibhanki trasnfer min idiphozithi £ 250
Ndwendwela iCapital.com ngoku
Intetho ethi 'biyela ukubheja kwakho', okuthetha ukulinganisa umngcipheko, ibikade ijikeleze eNgilane ukusukela ngeye-1600s. Kude kube namhla, abathengisi basebenzisa eli binzana kunye nesicwangciso, rhoqo. Ewe kunjalo, ukujiya kwi-forex akufiki ngaphandle kwemingcipheko, kodwa yeyona ndlela ilungileyo yokunciphisa ilahleko kwintengiso engazinzanga.
Ngoku uyazi malunga nayo yonke into oyifunayo malunga nendlela yokubiyela i-forex, ungaya kwaye uzifumanele umthengisi olungileyo. Ezintlanu esidwelise kweli phepha zonke zilawulwa yimibutho emikhulu yolawulo, oko kuthetha ukuba ulwazi lwakho lomntu lukhuselekile kwaye imali yakho igcinwe kwiakhawunti yebhanki eyahlukileyo kuleyo yenkampani yomrhwebi.
Kuthetha ntoni ukubethela i-forex?
Ukuhlawula i-forex yindlela yokunciphisa umngcipheko kwisikhundla semali-ukuze nayiphi na ilahleko inethemba lokuthintelwa lolunye urhwebo olunenzuzo. Ezona ndlela ziphambili zokubiyela zezi: ukuya kokubini okufutshane kunye nokude kwisibini esinye, okanye ukuthenga kubeka ukhetho ukuba umrhwebi ubambe isikhundla se-forex eside.
Ngaba ndingaziqhelanisa nokufaka i-forex kwiakhawunti yedemo?
Ewe. Ukuba usebenzisa iqonga elinje ngeZakhono uya kuthi ke unikwe ukufikelela kwiziko leakhawunti yokuziqhelanisa nalo ngaphambi kokuba ufike kwiimarike eziphilayo.
Ndazi njani ukuba umthengisi we-forex uvumelekile?
Kuya kufuneka usayine kuphela nomrhwebi olawulwa ngokupheleleyo. Lo ngumrhwebi ophethe iphepha-mvume komnye okanye ngaphezulu kumaqumrhu olawulo. Imizekelo ibandakanya; I-FCA, i-CYSEC, kunye ne-ASIC, njl. njl. Ukuba usakhathazekile, jonga inombolo yelayisensi eqongeni kunye newebhusayithi esemthethweni yomzimba.
Ngaba ndingaziqhelanisa nokubiyela i-forex?
Ewe. Ngokulula kakhulu. Konke okufuneka ukwenze kukutyikitya kumthengisi onikezela abathengi ngeakhawunti yasimahla.
Ngaba ndiyakwazi ukubiyela i-forex kwifowuni yam ephathekayo?
Ewe. Uninzi lweefemu zabarhwebi zibonelela ngeqonga elinobuhlobo, okanye kwezinye iimeko usetyenziso onokulu khuphela. Ungafaka kwaye ubeke iiodolo zorhwebo kwintende yesandla sakho.
Funda ngakumbi amaNqaku anxulumeneyo:
Imiqondiso ye-Forex yasimahla Amaqela eTelegram ka-2021
Ukurhweba kwangaphambili kwabaqalayo: Indlela yokuThengisa i-Forex kunye nokuFumana eyona Platform ilungileyo 2021